by ဂျက်ဖရီ Somers
1712 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးဖရက်ဒရစ်မဟာအဖြစ်လူသိများဖရက်ဒရစ်ဝီလျံ II ကို, ရှား၏တတိယ Hohenzollern ရှငျဘုရငျခဲ့သညျ။ ပေမယ့် ရှား ၏ဩဇာညောင်းခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူး သောသန့်ရှင်းသောရောမအင်ပါယာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ဖရက်ဒရစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသေးငယ်တဲ့နိုငျငံတျောသဂရိတ်ဥရောပပါဝါ၏ status မှထအထူးယေဘုယျနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ဥရောပနိုင်ငံရေးအပေါ်တစ်ဦးတည်မြဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖရက်ဒရစ်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုယဉ်ကျေးမှုကျော်ရှည်လျားသောအရိပ်, အစိုးရ၏အတွေးအခေါ်နှင့်စစ်တပ်သမိုင်းတတ်၏။
သူကသမိုင်းအတွက်အရေးပါဆုံးဥရောပခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးသူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သဘောထားတွေခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီး shaped ရှည်-စိုးစံမင်းဖြစ်၏။
ဖရက်ဒရစ် Hohenzollern ၏အိမ်, အဓိကဂျာမန်မင်းဆက်သို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ Hohenzollerns ဖရက်ဒရစ်ရဲ့အဖေဘုရင်ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံငါတစ်ခုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည် 1918 ခုနှစ်ပထမကမ္ဘာစစ်၏ပါတီအားအတွက်ဂျာမန်အထက်တန်းလွှာများ၏ဖြုတ်ချသည်အထိ 11 ရာစုအတွက်, ရှငျဘုရငျတို့ဖြစ်လာခဲ့သည် dukes, နှင့်မင်းဆက်တည်ထောင်ထံမှဒေသတွင်း၌ဧကရာဇ် ဖရက်ဒရစ်ပလ္လင်တော်ယူဆလာသောအခါသူတစ်ဦး outsize စစ်ရေးအင်အားရှိသည်မယ်လို့သေချာ, ရှား၏ဗိုလ်ခြေဆောအလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုစစ်သား-မင်းကြီးသည်။ ဖရက်ဒရစ် 1740 အတွက်ရာဇပလ္လင်မှတက်ကြွသည့်အခါတကယ်တော့သူ 80,000 ယောက်ျား, ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့နိုငျငံတျောသညျအဘို့သိသိသာသာကြီးမားအင်အားစုတစ်ခုစစ်တပ်အမွေဆက်ခံ။ ဤသည်စစ်ရေးပါဝါကိုဖရက်ဒရစ်သည်ဥရောပသမိုင်းအပေါ်တစ်ဦးအချိုးကျ outsize သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ်, ဖရက်ဒရစ်သည်မိမိအဘကိုအတည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေ့လာကဗျာနှင့်ဒဿန-ဘာသာရပ်များပိုနှစ်သက်, စစ်ရေးကိစ္စရပ်များအတွက်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမှုပြ; တကယ်တော့, ဖရက်ဒရစ်ကိုမကြာခဏသည်သူ၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်မိမိအဘအားဖြင့်ရိုက်နှက် berated ခဲ့သည်။
ဖရက်ဒရစ်အသက် 18 နှစ်ရှိသောအခါသူပညာရှင် Hans Hermann ဗွန် Katte အမည်ရှိအနေနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတစ်ဦးအသည်းအသန် attachment ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဖရက်ဒရစ်ကသူ၏ကြမ်းတမ်းအဘ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့, သူ၏မိခင်အဘိုးဘုရင်ကဂျော့ခ်ျငါခဲ့ပါတယ်, သူသည်သူ့ကို join ဖို့ Katte ကိုဖိတ်ကြားရှိရာဂရိတ်ဗြိတိန်, မှလွတ်မြောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ကြံစည်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဘုရင်ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနှင့်အတူဖရက်ဒရစ်အားသွင်းနှင့် Crown မင်းသားအဖြစ်သူ၏ status ကိုသူ့ကိုအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ခြိမ်းခြောက်, ပြီးတော့ Katte သူ့သားများ၏ရှေ့မှောက်၌ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။
1733 ခုနှစ်တွင်ဖရက်ဒရစ် Brunswick-Bevern တစ်ခုသြစတြီးယား Duchess ဧလိရှဗခရစ္စနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာဖရက်ဒရစ်နာကြည်းကြောင်းနိုင်ငံရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်; တဦးတည်းမှာသူ relenting နှင့်သူ၏ဖခင်အားဖြင့်အမိန့်အဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့အမှတဆင့်မသွားမီမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ဒါကဖရက်ဒရစ်အတွက် Anti-သြစတြီးယားစိတ်ဓါတ်များ၏မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလျှင်, သူကသြစတြီးယား, ပြိုကျသောသန့်ရှင်းသောရောမအင်ပါယာအတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့အရှည်လျားရှားရဲ့ပြိုင်ဘက် meddlesome နှင့်အန္တရာယ်ရှိခဲ့ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ဒီသဘောထားဂျာမနီနှင့်ဥရောပတို့၏အနာဂတျအတှကျရှည်တည်မြဲသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့သက်သေပြလိမ့်မယ်။
ဖရက်ဒရစ်သည်မိမိအဘ၏သေသောနောက်, 1740 အတွက်ရာဇပလ္လင်ယူဆ။ သူက 1740 ခုနှစ်ယူဆရှား-အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်နှင့်ခေါင်းစဉ်ကတကယ်တော့အသေးဒေသများတစ်စီးရီးမကြာခဏကြီးမားသောဒေသများအားဖြင့်ကွဲကွာခဲ့ကြအဖြစ်သူသာအောက်တွင်အစဉ်အလာလူသိများဘာတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအမွေဆက်ခံသောကွောငျ့သူဟာတရားဝင်ရှားဘုရင်, ရှားမဘုရင်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် မိမိအထိန်းချုပ်မှု။ လာမယ့်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော်ကျော်, ဖရက်ဒရစ်နောက်ဆုံးတော့စစ်ဆင်ရေး၏ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက် 1772 ခုနှစ်တွင်ရှား၏သူ့ကိုယ်သူဘုရင်ကကြေညာသည်လုံးဝရှား၏ပြန်ဖြစ်ဖို့ Prussian တပ်မတော်နှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံရေးမပါရမီ၏စစ်ရေးစွမ်းရည်ကိုအသုံးလိမ့်မယ်။
ဖရက်ဒရစ်သာကြီးမားမဟုတ်ခဲ့သည့်စစ်တပ်အမွေဆက်ခံသောကြောင့်လညျးမိမိစစ်ရေးစိတ်ဖခင်အားဖြင့်အချိန်တွင်ဥရောပအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်တိုက်ပွဲများအင်အားစုသို့ shaped ခဲ့သညျ။ တစ်ဦးစည်းလုံးရှား၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, ဖရက်ဒရစ်စစ်သို့ဥရောပဇောက်ချပါဝင်လာနည်းနည်းအချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သြစတြီးယားအောင်မြင်မှုစစ်ပွဲ။ ဖရက်ဒရစ်ရဲ့ပထမဆုံးအပြောင်းအရွေ့သည်သန့်ရှင်းသောရောမ Empress ၏ခေါင်းစဉ်အပါအဝင် Hapsburg ၏အိမ်၏ဦးခေါင်း, အဖြစ်မာရီယာထရီဇာ၏တက်ကြွစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ရာထူးများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အရှင်အစဉ်အလာသတ်မှတ်ချက်မပြည့်မှီဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းမာရီယာထရီဇာရဲ့ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများမိသားစုလက်၌ Hapsburg မြေများနှင့်အာဏာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ခဲ့သူသူမ၏ဖခင်ကချဥပဒေရေးရာအလုပ်အတွက်အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ ဖရက်ဒရစ်မာရီယာထရီဇာရဲ့တရားဝင်မှုဝန်ခံရန်ငြင်းဆန်နှင့် Silesia ၏ပြည်နယ်သိမ်းပိုက်ဖို့ဆင်ခြေအဖြစ်ဤကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကပြည်နယ်တစ်ခုအသေးအဖှဲပြောဆိုချက်ကိုခဲ့ပေမယ့်တရားဝင်သြစတြီးယားဖြစ်ခဲ့သည်။
အစွမ်းထက်မဟာမိတ်အဖြစ်ပြင်သစ်နှင့်အတူ, ဖရက်ဒရစ် Silesia ရန်သူ၏ပြောဆိုချက်ကိုလုံခြုံရေး, ချက်သည်သူ၏ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်တပ်ကိုသုံးပြီးနှင့် 1745 ခုနှစ်တွင်သြစတြီးယားအနိုင်ယူပြီး, လာမယ့်ငါးနှစ်စစ်တိုက်ကြ၏။
ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲ ။ 1756 ခုနှစ်တွင်ဖရက်ဒရစ်ကိုတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်တရားဝင်ကြားနေခဲ့သည့် Saxony ၏သူ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုအံ့အားသင့်။ ဖရက်ဒရစ်ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်ဝတ်ဆင်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံအများအပြားမြင်ဘူးသောနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ပြုမူ; သူသည်မိမိရန်သူများကိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်ရွှေ့မယ်လို့မသင်္ကာခြင်းနှင့်ဒါပထမဦးဆုံးအပြုမူ, ဒါပေမယ့် miscalculated နီးပါးဖျက်ဆီးခံရခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့ 1756 status ကိုမှနယ်စပ်ပြန်ရောက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်အတင်းမှသြစတြီးယားကောင်းစွာအလုံအလောက်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖရက်ဒရစ် Saxony ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်သူလုံးလုံးလြားလြားစစ်ပွဲဆုံးရှုံးရန်အလွန်နီးကပ်လာချင်ပါတယ်စဉ်းစားထူးခြားပြောင်မြောက်သော Silesia, ပေါ်သို့ကိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ပိုလန်၏ partition ။ ဖရက်ဒရစ်ပိုလနျကလူတစ်ဦးအနိမ့်အမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ပိုလန်ကလူထွက်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် Prussian သူတို့နှင့်အတူအစားထိုး၏အန္တိမရည်မှန်းချက်နှင့်အတူစီးပွားရေးအရကအမြတ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်မိမိအဘို့ပိုလန်ယူလို။ အတော်ကြာစစ်ပွဲများ၏သင်တန်းကျော်, ဖရက်ဒရစ်ကိုတိုးချဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Prussian သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်, နောက်ဆုံးမှာပိုလန်၏ကြီးမားသောဝေမျှသိမ်းယူရန်ဝါဒဖြန့်, စစ်ရေးအောင်ပွဲနှင့်သံတမန်ရေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဝိညာဉ်ရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, artistry, လူမျိုးရေးတင်းမာ
ဖရက်ဒရစ်နီးပါးဆက်ဆက်လိင်တူချစ်သူခဲ့လျှင်, သိသိသာသာသူအထီးအရာရှိများနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင် valet နှင့်အတူအများအပြားရေးရာကောက်ယူဘယ်မှာ Potsdam ၌သူ၏အိမ်ခြံမြေမှဆုတ်ခွာ, ပလ္လင်တော်အားမိမိတက်ကြွပြီးသည့်နောက်သူ့လိင်အကြောင်းကိုအလွန်ပွင့်လင်းခဲ့, ယောက်ျားပုံစံကျင်းပခေါ်ဆောင်သွားကဗျာရေးသားခြင်းနှင့် ကွဲပြား homoerotic themes များနှင့်အတူများစွာသောပန်းပုနဲ့အနုပညာရဲ့အခြားအကျင့်ကိုကျင့်ဝ။
တရားဝင်ကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့်ဘာသာတရား၏ထောက်ခံ (နှင့်ဒဏ်ခံ, တစ်ဦးကက်သလစ်အသင်းတော် 1740s အတွက်တရားဝင်ပရိုတက်စဘာလင် built-in ခံရဖို့ခွင့်ပြု) ပေမယ့်, ဖရက်ဒရစ်အနေနဲ့အဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရည်ညွှန်းအားလုံးဘာသာတရား၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်လက်မခံပေ "ထူးဆန်းအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကူးယဉ်။ "
သူကအထူးသဖြင့်သူက "ညစ်" နှင့် "ညစ်ပတ်" အမှိုက် "အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကသူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးလေးစားမှုအဖြစ်နီးပါး subhuman နှင့်မထိုက်တန်သောမှတ်သူရိုးစွန်းဒေသများမှ, ဆီသို့လည်းနီးပါးချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့သည်။ "
အများအပြားရှုထောငျ့၏တစ်ဦးချင်းလူသား, ဖရက်ဒရစ်အဆောက်အဦးများ, ပန်းချီ, စာပေနှင့်တေးဂီတဝ, ထို့အပြင်အနုပညာတစ်ထောက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအလွန်ကောင်းစွာပုလွေကစားနှင့်တူရိယာအဘို့များစွာသောအပိုင်းပိုင်းရေးစပ်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာစကား despising နှင့်သူ၏အနုပညာအသုံးအနှုန်းတွေများအတွက်ပြင်သစ်ပိုနှစ်သက်, ပြင်သစ်အတွက်အခွားရေးသားခဲ့သည်။ ဉာဏ်အလင်း၏အခြေခံမူများတစ်ဦးကကိုးကွယ်ဆည်း, ဖရက်ဒရစ်ကမေတ္တာရှိတဲ့အာဏာရှင်ကသူ့အာဏာနှငျ့အဘယ်သူမျှမငြင်းခုံ brooked ပေမယ့်သူလည်းမိမိလူမျိုး၏ဘဝတွေကိုပိုကောင်းစေမယ်အပေါ်မှီခိုနိုင်သူတစ်ဦးသည်လူကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ကျူးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြင်သစ်သို့မဟုတ်အီတလီ၏ယုတ်ညံ့ဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုကိုယုံကြည်နေသော်လည်းသူဂျာမန်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်မယ့်ဂျာမန် Royal Society ထူထောင်ပါကခြီးမွှောဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့, သူ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ဘာလင်ဥရောပ၏အဓိကယဉ်ကျေးမှုစင်တာဖြစ်လာခဲ့သည်။
အများဆုံးမကြာခဏစစ်သည်တော်အဖြစ်ကိုထိုအခါသတိရပေမယ့်, ဖရက်ဒရစ်ကတကယ်တော့သူကအနိုင်ရထက်ပိုတိုက်ပွဲများဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်မကြာခဏကသူ၏ထိန်းချုပ်မှု-နှင့် Prussian ကြည်းတပ်၏သူမတူနိုင်တဲ့ထူးချွန်အပြင်ဘက်ကနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သည်။ သူဟာနည်းဗျူဟာများနှင့်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ခြောတောက်ပခဲ့ပေမယ့်စစ်ရေးဝေါဟာရများ၌သူ၏အဓိကသက်ရောက်မှုက၎င်း၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်ရှား၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက်ကျော်လွန်ပါပြီသင့်ကြောင်းတစ်ခု outsize အင်အားစုသို့ Prussian တပ်မတော်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။
ဒါဟာမကြာခဏအစားရှားသဖြင့်စစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်း၏, တကတိုင်းပြည်နဲ့စစ်တပ်ကပြောသည်ခဲ့သည်; နန်းစံ Prussian လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆုံးအားဖြင့်ထောက်ပံ့, ဝန်ထမ်းများမှအကြီးအကျယ်ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်, နှင့်တပ်မတော်လေ့ကျင့်။
ဖရက်ဒရစ်ရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ Prussian အာဏာချဲ့ထွင်မှု (၏အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်နှောင်းပိုင်း 19 ရာစုအတွင်းဂျာမန်အင်ပါယာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှသွယ်ဝိုက်ဦးဆောင် Otto von Bismarck ) နှင့်အရှင်နှစ်ခုကမ္ဘာ့ဖလားစစ်ပွဲများနှင့်နာဇီဂျာမဏီ၏မြင့်တက်လာရန်နည်းလမ်းအချို့ကို၌တည်၏။ ဖရက်ဒရစ်မပါဘဲ, ဂျာမနီကမ္ဘာပါဝါဖြစ်လာကြပါပြီဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ဖရက်ဒရစ်သူစစ်တပ်နှင့်ဥရောပရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်သကဲ့သို့ Prussian လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူဟာကွာမြို့တော်ကနေတည်းခိုနေစဉ်မိမိကိုမိမိအပေါ်ဗဟိုပြုတန်ခိုးနှင့်, ပြင်သစ်ဘုရင်လူးဝစ် XIV အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်မော်ဒယ်တစ်လျှောက်တွင်အစိုးရကပြုပြင်ပြောင်းလဲ။ သူကပြဌာန်းခြင်းနှင့်ခေတ်မီဥပဒေစနစ်, စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဘာသာရေးသည်းခံရာထူးတိုးနှင့်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးမှုတ်သွင်းသောတူညီဉာဏ်အလင်းပွအခြေခံမူတစ်ခုအိုင်ကွန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦး form မှာအဟောင်းအာဏာရှင်ပါဝါကျင့်သုံးနေချိန်မှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုခေတ်သစ်အယူအဆများရာထူးတိုးသူတစ်ဦးတောက်ပခေါင်းဆောင်အဖြစ်ယနေ့အောကျမေ့ဖြစ်ပါတယ် "ဉာဏ်အလင်းအာဏာရှင်။ "
ဖရက်ဒရစ်မဟာ Fast Facts
မွေးဖွားခဲ့ပြီး: ဇန်နဝါရီလ 24, 1712, ဘာလင်, ဂျာမနီ
ကွယ်လွန်သွား: သြဂုတ်လ 17, 1786, Potsdam, ဂျာမနီ
နွယ်: ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံငါ Hanover ၏ Sophia Dorothea (မိဘများ); မင်းဆက်: Hohenzollern ၏အိမ်, အဓိကဂျာမန်မင်းဆက်
ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံ II ကို, Friedrich (Hohenzollern) ဗွန်Preußen: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
ဇနီး: Brunswick-Bevern (။ မီတာ 1733-1786) ၏သြစတြီးယား Duchess ဧလိရှဗခရစ္စ
အုပ်ချုပ်: ရှား 1740-1772 ၏အဘို့ကို; ရှား 1772-1786 အပေါငျးတို့သ
ဆက်ခံ: ရှား၏ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံ II ကို (တူလေး)
အမွေအနှစ်: အဥပဒေစနစ်ကိုခေတ်မီတဲ့ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးသို့ဂျာမဏီအသွင်ပြောင်း, စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်, ဘာသာရေးသည်းခံစိတ်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးကိုရာထူးတိုး။
"ငါကပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ရှေးနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်နှင့်အရသာလူမျိုး၏ credulity အားဖြင့် canonized ထားတဲ့ခရစ်ယာန်ဒဏ္ဍာရီ, ပတ်သက်. နဲ့လေးနက်တဲ့တိတ်ဆိတ်စောင့်ရှောက်ဖို့စဉ်းစားပါ။ "
"သင်ငါကွာဟတဲ့အတွက်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုတစ်နှစ်ဖြုန်းအတွက်, ငါ့ဂုဏ်သတင်းကိုမရပ်မနားကံဇာတာ၏ caprices ထိတွေ့မြင်နေအတွက်နေ့စဉ်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းဆုံးရှုံးအတွက်ကိုမြင်လျှင်ငါ့အဖို့အမည်မသိလူသေစေခုနှစ်, ဒီခွေးရဲ့အသက်တာ၌မဆိုအပျော်အပါးယူထင်ပါနဲ့ နှင့်ကို စိုးရိမ်. , အစဉ်မပြတ်ငါ့အသက်ကိုနှင့်ငါ့ကံကြမ္မာဒီလောက်စွန့်သနည်း ငါဆက်ဆက်အသက်တာ၏အပျော်အပါး, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျက်သရေ, ပဿဒ္ဓိ၏တန်ဖိုးကိုသိ, ငါဘယ်သူ့ကိုမှသလောက်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လို။ ရှိသမျှတို့ကိုငါသည်ဤကောင်းသောအမှုအရာအလိုရှိကြသည်တွင်ပေမယ့်ငါအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်သောသူတို့နှင့်အတူမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒဿနိကဗေဒကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်လုပ်ဖို့ငါတို့အသွေးကိုသွန်း၏နှင့်ငါတို့ repose ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာသစ္စာရှိရှိကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအစေခံရန်, အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးဖြစ်လျက်ရှိကျူးလွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။ "
"မရှေးမျှမကအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဘုရားသခငျသညျအစာစားခြင်းထက်ပိုပြီးရက်စက်စွာနှင့်စော်ကားအဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့လှသောစိတ်ကူးထားသည်။ - ဤခရစ်ယာန်တွေကိုဝဠာ၏အာဏာရှင်ပြုမူဆက်ဆံပုံ "။
> Domínguez, အမ် (2017, မတ်လ) ။ အဘယ်အရာကိုဖရက်ဒရစ်အကြောင်းဒီတော့ဂရိတ်လား ရှား၏ Warrior ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ မတ်လ 29, 2018 ရယူရန်။
> Mansel, P. (2015 ခုနှစ်, အောက်တိုဘာလ 3) ။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်လိင်တူ, ဖရက်ဒရစ်မဟာယနေ့အများဆုံးခေါင်းဆောင်များထက်ပိုမိုအစွန်းရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မတ်လ 29, 2018 ရယူရန်။
> မိသားစုထဲမှာကိုခြုပျ Hapsburg တော်ဝင်မင်းဆက်များအတွက်လိုင်း၏အဆုံးစာလုံးပေါင်းနည်း။ (2009, ဧပြီ 15) ။ မတ်လ 15, 2018 ရယူရန်။
ရှား၏> ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံငါအဆိုပါစစ်သားကဘုရငျ | ... (ကြိမ်မြောက်) အကြောင်း။ မတ်လ 29, 2018 ရယူရန်။
> "ရှား၏ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံ II ကို။ " ဝီကီပီးဒီးယား။
အာမက်ရှား Massoud | အဆိုပါ Panjshir ခြင်္သေ့
နယ်သာလန် / ဟော်လန်မင်းတို့
အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက် Ping-Pong လှော်
အဆိုပါသြဇာ Jenny Rivera အားဖြင့်အများစုက icon သီချင်းများ
101 ခြေလျင်ခရီး: Gaiters အပေါ်ထားနည်း
အခြေခံပညာအင်္ဂလိပ် Key ကိုစကားများစာရင်း 4
မိုးကြိုး & Lightning - သင်အပြင်ဘက်မှာရောက်နေသည့်အခါဘာလုပ်ရမှန်း
အဆိုပါဆရာယောဟနျ Newbery တံဆိပ်နှင့်ဘယ်သူ Winners Are ကဘာလဲ?
သံ Shots အပေါ်အနိမ့်လမ်းကြောင်း? သက်ရောက်မှုရာထူးအာရုံစိုက်
"Si un jour" Lyrics နှင့်ဘာသာပြန်စာပေ
ဂျူဒီ Brady အားဖြင့် '' ငါဇနီး Want အဘယ်ကြောင့် '' အပေါ်ပဟေဠိ Reading
ပြပွဲ Image ကိုပြခန်း: Frida Kahlo
Wootz သံမဏိ: ဒမတ်စကတ်သံမဏိဓါး Making
Freshman အမျိုးသမီးများနေ့ 10 ကောလိပ်သိကောင်းစရာများ
သင်ကကောလိပ်အတွက်နံနက်သို့မဟုတ်နေ့ခင်း Classes ရဲ့ကိုယူသင့်သလော
ဂေါက်ကွင်းအတွင်းအတင်းအဓမ္မ Carry ရှင်းပြ
ပုံ "မင်္ဂလာညအိုင်ရင်း" သိမ်းဆည်း Leadbelly အကျဉ်းထောင်ကနေ